प्रचण्डले १० प्रतिशत सेयर हाल्दा ओलीले ५० प्रतिशत स्वामित्व दिए, नेपालले शून्यमा झारिदिए | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
प्रचण्डले १० प्रतिशत सेयर हाल्दा ओलीले ५० प्रतिशत स्वामित्व दिए, नेपालले शून्यमा झारिदिए
२०७८ असार २६, शनिबार १९:४३:००
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको मिलन नेपाली राजनीतिक इतिहासको एक युगान्तकारी घटना थियो । यी दुई पार्टी मिलेकै कारण संसदमा एउटै पार्टीको बहुमत मात्र भएन, दुई तिहाइभन्दा ठूलो शक्ति बन्यो । इतिहासकै बलियो प्रधानमन्त्री देशले पायो । कम्तीमा पाँच वर्ष ढुक्कसँग एउटै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लागू हुन्छन् भन्ने अपेक्षा जाग्नु स्वाभाविक थियो ।
यो सम्भव भएको भए देश र जनताले केही न केही नतिजा अवश्य पाउँथे । कुर्सी जोगाउन मात्र खर्च हुने राजनीतिक नेतृत्वको समय अब देशको विकास र जनताको जीवनस्तर परिवर्तनमा हुनेछ भन्ने आकलन थियो । परिणाम दिन नसक्ने, मन्त्रीको मर्यादामा बस्न नसक्नेहरु कारवाहीमा पर्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले चुस्त एवं काबिल मन्त्रिमण्डल गठन गर्नेछन् भन्ने अनुमान थियो ।
सरकार गठन भएका सुरु वर्षमा यसका केही छनक पनि देखिएका हुन् । कर्मचारी र नेताका अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक, काम नगरी ठेका ओगट्ने र पेस्की हजम गर्ने ठेकेदारमाथि कारवाही, यातायात सिन्डिकेटमाथि प्रहार, राज्य संरक्षित सुन तस्करीको जालो छिन्नभिन्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अघि बढाउन दबाब, सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता नवीन अवधारणाको कार्यान्वयनलगायत केही असल प्रयास थालिएका थिए ।सबैभन्दा उल्लेख्य र महत्त्वपूर्ण त के भने अहिलेसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कालापानीमा भारतीय हस्तक्षेपको औपचारिक विरोध जनाउन नसकेको र लिम्पियाधुरासम्मको भूगोल नेपालको हो भन्न नसकेको इतिहासलाई खण्डित बनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट शब्दमा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा साहसका साथ नेपालको आधिकारिक नक्सामै त्यो भूगोल समावेश गरे । यति मात्र होइन, उनले सार्वजनिक रुपमै कालापानीबाट भारतीय सेना तत्काल हटाउन आह्वान गरे । भारतलाई पटकपटक विरोधपत्र पठाउने मात्र होइन, टेबुलमा वार्ताका लागि प्रस्ताव पनि पठाए ।
नेपाल राष्ट्रले आफ्नो स्वतन्त्र व्यक्तित्व उठाउँदै थियो । आफ्नो स्वाभिमानी कद विश्व रंगमञ्चमा सबैले देख्ने गरी नेपालले शानसँग उभ्याउँदै थियो । यो देखेर पुष्पकमल दाहा र माधव नेपाललाई छटपटी भयो । औडाहा भयो । कतै कालापानीबाट भारतीय सेना हटी पो हाल्छ कि ? कतै लिम्पियाधुरासम्म नेपाल सरकारले जनगणना गरी वडा कार्यालय स्थापना गरी पो होल्छ कि ? यस्तै छटपटी र पीडाबोध भएपछि पार्टीभित्रैबाट ओलीविरुद्ध आगो बाल्न थाले ।
ओलीले प्रचण्डलाई कुनै अन्याय गरेका थिएनन् । एमालेको संगठन, मताधार र ब्रान्ड भ्यालुसँग तुलना गर्ने हो भने माओवादी करिब १० प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा पनि ओलीले राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ता रक्षाको पुनीत उद्देश्यका साथ प्रचण्डलाई आफैसरहको हैसियत दिए । पार्टीमा समान हैसियतको अध्यक्ष पाएपछि प्रचण्ड पनि दंग थिए ।
वास्तवमा प्रचण्डलाई त्यो स्थान दिइएपछि नेपाल कहिले तेस्रो त कहिले चौथो वरीयतामा पुगेका थिए । प्रचण्डको एमाले प्रवेश र ओलीको सिंहदरबार प्रवेशले सबैभन्दा बढी छटपटी माधव नेपाललाई भएको थियो । भित्रभित्रै माधव नेपाल प्रचण्डलाई ओलीविरुद्ध उकास्ने ध्याउन्नमा लागे । जब ओली सरकार दुई वर्षको पुग्यो, खुलेरै उनका विरुद्धमा पार्टीभित्रैबाट मोर्चाबन्दी चल्यो ।
माधव नेपालले भारतीय दूतावास र अरु अदृश्य एजेन्टहरुको संयोजनमा प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवसमेतलाई राखेर मोर्चाबन्दीको प्रस्ताव राखे । यो कुरा कतै छिपेको पनि छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै यो कुरा बताएका छन् । दूतावासको संयोजनमा होटलहरुमा यस्ता भेला भएको सूचना ओलीले तत्कालै सार्वजनिक गरेका थिए ।
माधव नेपालले ओली र प्रचण्डको बीचमा कहिल्यै मिलन हुनै नसक्ने गरी कानमा विष भरेका थिए । प्रचण्ड ओलीनजिक पुग्दा नेपालले दुई अध्यक्षको चोचोमोचोलाई मान्यता दिन नसक्ने भन्दै एमालेको औपचारिक मञ्चमै बताएका थिए । जसरी हुन्छ, ओली र प्रचण्डबीच फाटो ल्याएर एमालेमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नु नेपालको प्रमुख ध्येय थियो । अन्ततः एमालेबाट प्रचण्डलाई विस्थापित गरी पचास प्रतिशतको स्वामित्वबाट सिधै शून्यमा झार्न नेपाल सफल भए ।
प्रचण्डले नेपालको भाउँतोमा नलागी ओलीका हरेक कदममा साथ दिने, नीतिगत रुपमा सल्लाह र सुझाव उपलब्ध गराउने, छलफल, बहस र प्रशिक्षण चलाउने, देश दौडाहा गरी एमाले कार्यकर्ताका स्पन्दन छाम्ने, संगठनमा भिज्ने र ओलीपछिको वैकल्पिक नेतृत्वको भद्र तयारी गर्ने नीति अँगालेका भए अहिलेसम्म उनी एमालेको एकल अध्यक्ष भइसक्ने थिए । किनभने, यतिखेरसम्म एमालेमा महाधिवेशन पनि भइसक्ने थियो । किनारा लाग्ने पालो माधव नेपालको हुन्थ्यो ।
तर, प्रचण्ड नेपालको भाउँतोमा लागेर दुई वर्षमै ओलीलाई सत्ता र पार्टीबाट उछिट्याउन लाग्दा आफ्नै टाङ उत्ताना भएको पत्तै पाएनन् । प्रचण्डपछि रछ्यानमा पुग्ने पालो माधव नेपालको भएको छ । माधव नेपालले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा २३ मत दिएको दावी गरे पनि अन्ततः सबै एमालेमा फर्किने निश्चित भएको छ । अब माधव नेपाल पनि एक्लै हुने भएका छन् । अन्तिममा कतै ओत लाग्ने ठाउँ बाँकी नरहेपछि नेपाल पनि या त प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता, नभए एमालेमै केपी ओलीको कार्यकर्ता भएर बस्नुको विकल्प छैन ।